के तपाईलाई उच्च रक्तचाप छ? यस्ता छन् उपचार विधि – onlinedarpan:
Posted on December 29, 2018 December 29, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 37 Views
के तपाईलाई उच्च रक्तचाप छ? त्यसो हो भने नआत्तिनुहोस् । यसका कारणहरु बारे सही जानकारी राख्न सके यसबाट बच्न सकिन्छ । आज हामी स्वास्थ जानकारी च्यानलमा उच्च रक्तचाप के हो? यसका कारण र बच्ने उपाएका बारेमा जानकारी दिन गैरहेका छौ ।
उच्च रक्तचाप अर्थात् ब्लडप्रेसर, मुटुबाट बाहिरिने र भित्र पस्ने रगतद्वारा रक्त नलिमा परेको चापलाई रक्तचाप भन्ने गरिन्छ । सामान्यतया रक्तचाप भनेको १२०÷८० हो । १८ वर्षभन्दा माथिका मानिसमा यदि माथिल्लो ब्लड प्रेसर (सिस्टोलिक) १४० अथवा त्यसभन्दा बढी र तल्लो (डायस्टोलिक) ब्लड प्रेसर ९० वा त्यसभन्दा बढी पुगे उच्च रक्तचाप भएको मानिन्छ ।
थप जानकारी भिडियोबाट लिनुहोस
Share26 Tweet Google+ Pin0 26shares एजेन्सी । उमेर ढल्किंदै जाँदा कपाल फुल्नु भनेको वृद्धावस्थाको संकेत मानिन्छ । त्यसैले कपाल फुल्नुलाई अनुभव र बुद्धिको भण्डारको रुपमा लिइन्छ । तर, उमेर नहुँदै कपाल फुल्न थाल्यो भने त्यो समस्या बन्छ । त्यो समस्या युवाहरुमा पछिल्लो समय अझ बढी देखिंदै गएको छ । कपालले व्यक्तिलाई सुन्दर बनाउँछ । त्यसैले विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Share27 Tweet Google+ Pin0 27shares कहिलेकाँही हाम्रो जीवनमा यस्तो हुन्छ कि हामी जीवनमा आफ्नो लागि एकदमै खुसी हुन्छौं । खुसीको बेला हामीले धेरै कुरा भुलिरहेका हुन्छौं, जसले जीवनमा दिर्घकालीन असर पुर्‍याउँछ । चाणक्य नीतिमा यस्ता धेरै जीवनपयोगी सन्दर्भहरु उल्लेख गरिएका छन् । यहाँ भने जवान महिलाले जवानीमा कहिल्यै भुल्न नहुने कुराहरुबारे उल्लेख गरिनेछ । १. विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Share8 Tweet Google+ Pin0 8shares जताततै विवाहको दृष्य देखिन्छ । धेरै युवायुवतीहरु जोडी बन्न लागेका छन् । कतै प्रेम विवाह हुँदैछ, कतै मागी विवाह हुन लाग्दैछ। हिजोआज हामी फेसबुकको पुस्तामा छौ । फेसबुकमा हेरेको, भेटेको आधारमा पनि विवाह भैरहेको हुन्छ । फेसबुककै आधारमा एकले अर्कालाई मन पराइरहँदा उनीहरूका अभिभावक एवं अग्रजहरूको आशीर्वाद छ कि छैन विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…